अध्ययन भन्छ– एयर होस्टेसहरुलाई यसकारण क्यान्सरको खतरा
जेन क्रिस्टेनसेन, सिएनएन
असार १४, २०७५ बिहिवार १५:१६:१७ प्रकाशित
एयर होस्टेस निकै ग्ल्यामरस र आकर्षक पेसा मानिन्छ। चिटिक्क परेको ड्रेसमा मिठो मुस्कानसहित यात्रुको स्वागत तथा रेखदेखका लागि बसेका एयर होस्टेसको भित्री दुःख कसलाई थाहा होला र?
जति आकर्षण र चासो यस पेसाप्रति छ त्यति नै दुःख पनि।
एक नयाँ अध्ययनका अनुसार आकाशका परी एयर होस्टेसहरुलाई क्यान्सरको खतरा देखिएको छ। उनीहरुलाई स्तन क्यान्सर र छालाको क्यान्सर बढी देखिने गरेको पाइएको छ। जर्नल इन्भाइरोमेन्ट हेल्थमा प्रकाशित अध्ययनले अनुसार पेट, पाठेघर, मुत्राशय, थाइराडको क्यान्सरको समेत जोखिम उच्च हुने उल्लेख गरेको छ।
अध्ययन अनुसार २ देखि ३ वटा बच्चा भएका महिलामा स्तन क्यान्सरको दर अझ बढी देखिएको सहलेखक हावर्ड टिएच च्यान स्कुल अफ पब्लिक हेल्थकी रिसर्च असोसियटकी इरिना मुर्दोकोभिच बताउँछिन्।
जबकि प्राय: धेरैजसो बच्चा जन्माउने महिलामा स्तन क्यान्सरको जोखिम कम हुन्छ किनकि उनीहरुले नियमित आफ्ना बच्चाहरुलाई स्तनपान गराइरहेका हुन्छन्। धेरै बच्चा भएका महिलाहरुलाई राम्ररी निद्रा भने पुगिराखेको हुँदैन। मोर्दुकोभिच भन्छिन्, ‘विशेषगरी जो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्छन्, उनीहरुलाई गाह्रो हुन्छ। उनीहरुको मानसिक, शारीरिक र व्यावहारिक परिवर्तनमा फरक आउँछ। समयमा सुत्ने र उठ्ने तालिकामा गडबडी हुँदा यसले क्यान्सरको जोखिम बढाउने हुन्छ।'
हावर्ड फ्लाइट अटेन्डेन्टको हेल्थ स्टडीले कामले मानिसको स्वास्थ्यमा कस्तो हानि पुर्याउँछ भनेर अध्ययन गरेको छ। करिब ८० प्रतिशत एयर होस्टेसहरु महिला नै रहेका छन्, जसले यो पेसा नै महिलामय देखिएको अध्ययनले बताउँछ।
अध्ययनले एयर होस्टेसहरुलाई क्यान्सरको जोखिम किन हुन्छ भन्ने उत्तर त दिँदेन तर रिपोर्टका लेखकहरुले केही अघिका अध्ययनहरु पनि पेश गरेका छन्। कार्कोजिन्स जस्ता किटनाशक, आगो निभाउने यन्त्र, हवाई इन्धन जस्ता अरु विभिन्न रसायन विमानमा हुने हुनाले एयर होस्टेसहरुमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ। त्यसले कस्मिक विकिरण उत्पादन भइरहेको हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि त्यस्ता विकिरणले क्यान्सरको जोखिम बढाउने बताएको छ।
यदि तपाईं धेरैजसो विमानमै आवतजावत गर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई पनि क्यान्सरको खतरा छ त? भन्ने प्रश्नमा मुर्दोकोभिच भन्छिन्, ‘विमानमा आवतजावत गरिरहने मानिसको बारेमा खासै त्यति अध्ययन त भएको छैन तर उनीहरु पनि एयरहोस्टेसले भोग्ने अवस्थाबाट प्रत्यक्ष रुपमा गुज्रिरहेका हुन्छन्।'
नासाका वैज्ञानिकहरुले हाई अल्टिच्युड रेडियसनको बारेमा अध्ययन नगरेका होइनन्। यो अध्ययनले उड्डयन उद्योगलाई चालक दलक सदस्य र यात्रुहरुको अनुगमनमा सुधार ल्याउने काम गर्यो।
गिजल स्कुल अफ मेडिसेनका माइक्रोबायोलोजी र इम्युनोलोजीका प्राध्यापक स्टिभ फाइरिङ भन्छन्, ‘अहिले हालसालैको अध्ययन हेर्दा यसमा ठोस निर्णय लिइहाल्न अलि गाह्रो छ।'
यस अध्ययनमा सहभगिता नजनाए पनि एयरहोस्ट सम्बन्धका अरु रिसर्चमा उनी सहभागी भइसकेका छन्। उनले पनि महिलामा मेलोनामा र मेलोनामारहित छालाको क्यान्सर भेटिएको पाए। 'विशेषगरी मेलानोमारहित छालाको क्यान्सर ४ गुणाले वृद्धि भएको देखियो,' उनी भन्छन्, 'त्यो चाहिँ अलि सोचनीय विषय हो।'
मुर्दोकोभिच र उनका साथीहरुले एयर होस्टेसका समस्याहरुलाई नीतिगत रुपमा उठाउन सकिने सोच बनाएर यो अध्ययन गरेका हुन्। युरोप कस्मिक रेडियसनको विकिरणका बारेमा धेरैजसो अनुगमन कानुनले नै गर्ने गर्छ। अमेरिका एयर होस्टेसहरुको पेसागत सुरक्षाका लागि अलि संकुचित नै रहेको छ।
मुर्दोकोभिच भन्छिन्, ‘हाम्रो यो अध्ययनले पक्कै पनि नीति निर्माताहरुले पेसागत स्वास्थ्यको कुरामा ध्यान पुर्याउनेछन्, हामी आशावादी छौँ यसले निकै सहयोग गर्छ।'